यी हुन् तालतालका बलिउड बुढोकन्य सेलिब्रेटिहरु ! कोही विहे नगरी बाउ बन्ने, कोही रोमान्स मात्रै गर्ने
Monday 28th of May | २०७५ जेठ १४ सोमबार
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७३ पौष १२ मंगलबार |
मुम्बई । बलिउड अभिनेता सलमान खान आज आफ्नो ५२ औँ जन्मदिन मनाउँदैछन् । २७ डिसेम्बर १९६५ मा जन्मेका सलमान अहिलेसम्म पनि अविवाहित नै छन् । सलमान जहाँ जान्छन् उनलाई विवाह कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्न ठडिईहाल्छ । तर सलमान कहिले के कहिले के भनेर टारिदिन्छन् ।
जीवनको ५१ औँ बसन्तमा सलमानको नाम धेरै युवतीहरुसँग जोडीयो तर विवाह भने कोहीसंग पनि हुन सकेको छैन । उनी संगीता बिजलानी, ऐश्वर्या राय, कटरिना कैफ, सोमी अलिसँग निकै निकट रहे ।
सलमान खानलाई बलिउडमा सबैभन्दा धेरै पटक प्रेममा पर्ने अभिनेताको रुपमा पनि चिनिन्छ । केहीले सलमानलाई प्रेमको मामलामा ब्याड ब्योय भनेर पनि भन्छन् ।
सलमान जस्तै उमेरले चार पाँच दशक काट्दा पनि अविवाहित नै हुने अन्य सेलिब्रेटीहरु पनि छन् । जसका बारेमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ ।
अभिनेता मुकेश खन्ना ५८ बर्ष भईसके तर विवाह गरेका छैनन् । मुकेशले दर्जनौँ सिनेमा र टेलिभिजन शोहरुमा काम गरेका छन् ।
फेशन डिजाईनर मनिष मल्होत्रा पनि आजसम्म अविवाहित नै छन् । ५१ बर्षका मनिषले प्राय बलिउड सेलिब्रेटीहरुको डे«स डिजाईन गर्छन् । ५ डिसेम्बर १९६६ मा जन्मेका मनिष एक सफल र ट्यालेन्ट फेसन डिजाईनरका रुपमा विश्वभर चिनिएका छन् ।
अभिनेता, निर्देशक तथा स्क्रीन राईटर राहुल बोसले पनि पचास दशकमा प्रवेश गर्न आँटे तर विवाहको सुरु कसेका छैनन् । उनी ४९ बर्षका भईसकेका छन् ।
४४ बर्षिय अभिनेता राहुल खन्नाले पनि अहिले खोज्या जस्तो सुकुमारी कन्या भेटेकै छैनन् । उनले बलिउडमा लभ आजकाल, एलोन, वेक अप सिद लगातयत केही टेलिभिजन शोहरुमा पनि काम गरेका छन् ।
अभिनेता अरमान कोहली पनि अविवाहित अभिनेताको सूचिमा पर्छन् । जीवनका ४४ बसन्त पार गर्दा पनि उनलाई वेहुला बन्ने सुनौलो अवसर भने जुरेकै छैन । कुनै समय अरमानको अभिनेत्री तनिषासँग नाम जोडीएको थियो । तर यो जोडीको प्रेम नमौलाई ओइल्याएर गयो ।
निर्माता तथा निर्देशक करण जोहर पनि अविवाहित पुरुष सेलिब्रेटीको सूचिमा छन् । दर्जनौँ सफल फिल्महरु बनाएका करणको विवाह नगरी पिता बन्ने हल्ला एकताका निकै थियो । तर उनको त्यो रहर पुग्न त परको कुरा कुनै सुकन्यासंग मायापिरिम पनि परेको हल्ला चलेको छैन । २५ मार्च १९७२ मा जन्मेका करण ४४ वर्षका भएका छन् ।
अभिनेता अक्षय खन्ना पनि बुढोकन्या सेलिब्रेटिको सूचीमा पर्छन् । उनको उमेर ४१ वर्ष भयो । तर विवाह गर्ने रहर भने उनले गरेको पाइदैन । २८ मार्च १९७५ मा जन्मेका अक्षयले बलिउडका दर्जनौँ सिनेमामा काम गरेका छन् । करिअरमा औसत रहेका अक्षय वैवाहिक जीवनमा भने अभागी जस्तै देखिन्छन् ।
मोडल तथा अभिनेता डिनो मोरीयाको नामम धेरै युवतीहरुसँग जोडियो । जसमा सबैभन्दा धेरै चर्चा अभिनेत्री बिपासा बासुको रह्यो । ९ डिसेम्बर १९७५ मा जन्मेका डिनोले विवाह नगरीकनै धेरै युवतीहरुसँग रोमान्स गरेका छन् । तर विवाह पछिको रोमान्सको अनुभव भने संगालेका छैनन् । डिनो ४१ बर्षका भए ।
अभिनेता तुष्षार कपूर पनि विवाह नगरी बसेका छन् । तुषारले विवाह गरेर श्रीमतीलाई समय दिन नसक्ने भन्दै केही समय अघि सेरोगेरीबाट एक छोरा भने जन्माईसकेका छन् । तुषारले पनि ४० बर्ष पार गरिसकेका छन् । उनको जन्म १९७६ नोभेम्बर २० मा भएको हो ।
अभिनेता तथा निर्माता अभय देओलले पनि चार दशक काट्दा सम्म लगन गाठोँ कस्ने सौभाग्य पाएका छैनन् । अभय केही समय प्रीती देसाईसँग लिभ ईन रिलेसनसिपमा पनि थिए । तर उनको सम्बन्धले विवाहको रुप भने लिएन । हाल अभय एक्लै छन् ।
यलम्बर संगीत प्रतियोगिताको टिसर्ट सार्वजनिक
गायक रामजीको मार्मिक लोकदोहोरी ' दुई मुटुको धड्कन' सार्वजनिक (भिडियो सहित)
मिडियाबाट टाढा भागेर गुमनाम बसेको छैन : कलाकार बिपिन कार्की
गायिका आशा र गायक दिपुको 'पागल प्रेमी' सार्वजनिक (भिडियो सहित)
मिसेस तामाङ्ग नेपाल २०१८ को ग्राण्ड फिनाले सम्पन्न
मिलन पल्ली र सुरक्षाको 'उर्लियो नदी' बजारमा (भिडियो सहित)
निर्देशक बविताको निर्देशनमा गायिका मिनाको दोश्रो एल्बम 'कालि गोरी नेपालकी छोरी' (भिडियो सहित)
अनुप​ र​ शिल्पा दुबै पुलिस​ ड्रेस​मा कम्म​र​ म​र्काउँदै (भिडियो सहित)
बिवाद मिलाउन खप्पिस प्रियंका, मिलाईन् यी दुई जोडीलाई !
भ्रष्टाचारको महाजालो लहरो तान्दा पहरो गर्जिने
युट्युब च्यानल सञ्चालनमा युवा आकर्षण बढ्दो
कानून नहुँदा स्थानीय तहमा अपेक्षित उपलब्धि भएन
कालिमाटी डीएसपी प्रदिप क्षेत्रीको चेत खुल्यो, लागू औषधका फरार अभियुक्त सुनिल रानाभाट पक्राउ
इरानी विदेशमन्त्री भारत जाने
प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पछिल्लो वर्षमा उल्लेखनीय सुधार
एकीकृत वस्ती र प्रदेश नं ३ को नामकरणबारे मुख्यमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण
सामुदायिक रेडियोसम्बन्धी नीति चाँडो ल्याइन्छ : राज्यमन्त्री बाँस्कोटा
‘नायिका श्वेताको माझी बस्तिलाई सहयोगको ओइरो’
​धरातल बिर्सदा करोडपतिबाट रोडपति ! बाजेको सेकुवाका चेतन 'जोगी' बन्ने ?
बाहुनले कसरी मगरलाई हिन्दू बनायो ?
दीप बस्न्यातको मानव तस्करी पर्दाफास, छोरा बचाउन यस्तो चाले चाल
आईजीपी खनालले बनाए कमजोर टिम ! यी जर्नेललाई प्रधानसेनापति बन्ने रहर
कालीमाटी डीएसपी प्रदिप क्षेत्रीको चेत खुलोस् , ‘गणतन्त्रमा सबै नागरिकको पहुँच सबै ठाउँमा पुग्छ’
‘एसएसपी खत्रीलाई पक्रिए सबै रहस्य खुल्छ’
चार अर्ब ७४ करोड ठगीमा संलग्न म्यानपावर व्यवसायी श्रेष्ठ पक्राउ ( यस्तो छ नालीबेली)
जान्नुहोस् यी ३ कुरा भएका पुरुष कहिल्यै पनि खुशी हुन सक्दैन -भिडियो हेर्नुहोस् !